Wararka Maanta - Nabad iyo Nolol
DHAGEYSO:-Sirdoonka Kenya oo la sheegay inay u hanjabeen Musharixiinta Jubbaland
Wararka ka imaanayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in magaladaasi ay xubno ka tirsan sirdoonka Kenya ay kula kulmeen qaar ka mida musharaxiinta Jubbaland, kuwaasi oo ay kala hadleen in ay taageeraan hogaamiyaha Jubaland ee Axmed Madoobe. Dhanka kale cabdi nuur ibraahim xuseen ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in maamulka taladu ka dhamaatay amar ku bixiyeen hoyga ay...
Baraha bulshada Soomaalida ku xiriirto ee Internet-ka waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay qabsaday sawirka asaasaha iyo hoggaamiyihii Ururka Al-Shabaab oo muddo toban sano ka badan dagaallo ka wada dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Wadaadkaan oo lagu magacaabo Ismaaciil Caraale oo da’diisu tahay 55-sano jir ayaa sawirkiisa isagoo ku sugan goob xaflad ka dhaceyso ka soo muuqday...
Maxkamada Sare ee Puntland oo saaka u faariisanaysa kiiska Marxuumada Caaisha
Maxkamada sare ee Puntland ayaa saaka markale dhagaysanaysan kiiska marxuumada caaisha taas oo kufsi iyo dil loogu gaystya degmada Gaalkacayo bishii Maarso ee sanadkaan, kiiskaan ayaa laba jeer oo hore waxaa racfaan laga soo qaatay maxkamada Degmada Garoowe iyo tan Gobolka Nugaal kuwaas oo 3da eedaysane dil ugu soo xakumay. Garmaqalka koowaad oo 17ka bishaan dhacay ayaa...
DHAGEYSO:-Jubbaland oo maalmaha soo socda yeelan doonta 2-madaxweyne & Gole Baarlamaan
Sida muuqata maalmaha ama bilaha dhow waxaa magaalada Kismaayo looga dhawaaqi doono labo madaxweyne,labo Baarlamaan iyo waliba labo gole Wasiiro,kuwaasi oo midba howshiisa si gaar ah ugu dhaqaaqi doona haddii aan wax isbedel ah ku imaan sida ay hadda wax ku socdaan. Magaalada Kismaayo hadda waxaa ka jira labo gole Baarlamaanka oo kala taageersan Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha...
Wasaaradaha Warfaafinta Dowladda Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada Soomaaliya, ayaa shir wada-tashi ah ku yeeshay magaallada Muqdosho kaas oo looga hadlay iskaashiga labada heer eewasaaradaha gaar ahaan dhanka wacyigelinta. Shirka, waxaa ka qeyb galaya wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Daxiiska Dowladda Federaalka Soomaaliya,Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiirka...
DAAWO:- Wasiirka Amniga XFS oo bogaadiyay Dadaallada Dib-u-heshiisiinta Galmudug
Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Mamxamed Abuukar Islaaw oo shalay soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay saraakiisha laamaha amniga ee ku howlan adkeynta amniga caasimadda. Kulanka ayaa looga hadlay laba jibbaaridda dalaallada lagu adkeynayo amniga guud, gaar ahaan inta uu socdo shirka dib-u-heshiisiinta ee dhawaan...
AKHRISO:- Koonfur Afrika: Dad loo xiray boobkii loo geystay Ganacsatada Soomaalida
Todobaadkii la soo dhaafay ayaa Kooxo Burcad ah waxaa ay boob kula dhaqaaqeen Goobo Ganacsi ay leeyihiin dad u badan Soomaali iyo Itoobiyaan,kuwaas oo ku yaalla Magalada Soweto ee dalkaasi Koonfur Afrika. Booliska dalkaas ayaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen saacadihii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigeen 18 Ruux oo lagu tuhmayo boobkii ka dhacay Xaafadaha Dobsonville,...
AKHRISO:- Ciidamada Soomaaliland oo qof Shacab ah ku dilay Magalada Laas-Caanood
Wararka laga helayo Magalada Laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Booliska Soomaaliland ay halkaasi xalay ku dileen mid ka mid ah dadka Shacabka ah ee ku nool Magaaladaas. Qofka Shacabka ahaa oo ay Ciidamadu dileen ayaa dad ku sugan Magalada Laas-Caanood waxaa ay Magaciisa ku sheegeen Cabdiraxmaan Cumar Faarax ( Soomadow),,waxana xilliga...
DAAWO:- Ciidamadda dowladda oo howlgalo ka dhan ah Alshabaab ka wadda Sh/hoose
The post DAAWO:- Ciidamadda dowladda oo howlgalo ka dhan ah Alshabaab ka wadda Sh/hoose appeared first on Allgalgaduud.Com. ...
AKHRISO:- Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka hor yimid Guddiga Doorashooyinka Puntland
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa ka horyimid magacaabista xubnaha guddiga doorashada oo shalay la shaaciyay liiska magacyada 5 xubnood oo ku biiraya 4 xubnood oo maalmo ka hor uu magacaabay guddoonka gollaha wakiiladda PUNTLAND. Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxweyne Kuxigeenka ayaa lagu cadeeyay habayaraatee inaan Madaxweyne Siciid Denni...